महानगरको ‘फाउन्टेन इको पार्क’ अलपत्र
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ महानगर भित्र समाचारमहानगरको ‘फाउन्टेन इको पार्क’ अलपत्र
निजी क्षेत्रलाई ठेक्का लगाउने महानगरको तयारी
विराटनगर/विराटनगर महानगरपालिकामा घुमफिर गर्ने रमणीयस्थल छन् ? प्राय धेरैले यो प्रश्न गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा विराटनगरमा घुमफिर गर्ने रमणीयस्थल नै नभएकै हुन् त ? भौगोलिक र प्राकृतिक हिसाबले घुमफिर गर्ने रमणीय पर्यटकीयस्थल नभए पनि मानव निर्मित पार्कहरु भने महानगरभित्र नभएका हैनन् । तर भएका स्थलहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकले निर्माण गरेको फाउन्टेन इको पार्क अलपत्र अवस्थामा छ । २०७५ असोजमा विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले पार्कको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि पार्क सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो ।
तर पछिल्लो समय कोरोनासँगै भन्द भएको पार्क अस्वस्थ भएको छ । बन्द रहेको पार्कको रेखदेख नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । पार्कको प्रवेशद्वारमा ताला झुण्डिएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । तर अहिलेसम्म पार्कको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा महानगर बेखबर छ । महानगरले निर्माण गरेका हरेक संरचनाको अवस्था यस्तै हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
वीरेन्द्र सभागृहसँगै रहेको पार्क पछिल्लो समय महानगरको आँखाभन्दा बाहिर रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार पार्क सञ्चालन कहिले हुन्छ भन्ने एकिन छैन । मोरङ व्यापार सङ्घसँगको साझेदारीमा महानगरले पार्कको निर्माण गरेको थियो । जसअनुसार महानगरको ८५ प्रतिशत र मोरङ व्यापार सङ्घको १५ प्रतिशत लगानिमा पार्कको निर्माण भएको थियो ।
यता महानगरले भने कोरोनाका कारण बन्द भएको पार्क चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको बताएको छ । महानगरको कार्यपालिका बैठकले पार्क सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको महानगरका बित्तीय व्यवस्था महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले बताए । उनले भने, ‘महानगरले सूचना गरेर ठेक्का लगाएपछि पार्क सञ्चालनमा आउँछ ।’